Ny Tsy Fanaovana Herisetra, Ny Fandalàna Ny Nentim-paharazana ary ny Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 3:25 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Febroary taona 2006 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanao antsafa niaraka tamin'ny Dr. Brian Martin, mpanoratra ny tsy fanaovana herisetra, ary mpampianatra mpiara-miombon'antoka amin'ny Siansa, Teknolojia ary ny Fiarahamonina ao amin'ny Oniversiten'i Wollongong ny Fanousian, bilaogy iombonana. Efa nifantoka tamin'ny hetsika tsy misy herisetra nandritra ny volana maromaro ity blaogy ity. Mahavariana fa tsy manome vaovao fotsiny ihany ireo bilaogera fa mandray andraikitra ihany koa.
Matahotra i Andishe No (midika hoe Hevitra Vaovao) fa nihemotra mankany amin”ny vanim-potoana talohan'i Khatami ny firenena eo amin'ny sivana. Mihevitra izy fa na dia maro aza ireo boky voaràra tamin'ny taonjato faha-iraika amby roapolo, tsy afaka manakana ny olona hahazo vaovao ny governemanta. Te-hifehy ny tranonkala ao Iran sy hametraka azy ireo amin'ny torolalana ny governemanta .
Ho an'i Abthai, ny fanontaniana momba ny zon'olombelona dia tsy mifanohitra amin'ny Fiarovam-pirenena. Milaza izy fa tao anatin'ny vanim-potoanan'i Khatami, farafaharatsiny afaka naneho ny heviny ireo nampijaliana saingy tao anatin'ny volana vitsy lasa, tsy izany intsony no zava-misy.
The Spirit of Man, (ny fanahin'ny olombelona), ​​bilaogera monina ao Kanada indray te hanangana ny lisitr'ireo bilaogera Iraniana mpandala ny nentin-drazana. Mamaritra ny dikan'ny fandalàna ny nentin-drazana tahaka izao izy:
“I am in its classical essence a conservative, a liberal and secular conservative, meaning I believe in smaller government, free trade, less taxes, self governance, believing in traditional values and I do believe in separation of Mosque from State and I ultimately believe in individuals’ freedoms. But let me make it clear that I am not a Conservative in a way that most people think of when it comes to Iran and Iranian conservatisms.”
“Mpandala ny nentim-paharazana, liberaly sady laika mpandala ny nentim-paharazana aho raha ny tena izy, izay midika fa mino ny governemanta kelikely kokoa, ny varotra malalaka, hetra kelikely kokoa, sy ny fitantanan-tena aho, matoky ny soatoavina nentim-paharazana ary mino ny fisarahan'i Moskea amin'ny Fanjakana ary indrindra mino ny fahafahan'ny tsirairay. Nefa avelao aho hanazava fa tsy mpandala ny nentim-paharazana amin'ny fomba izay eritreretin'ny ankamaroan'ny olona raha resaka Iran sy kaonservatisma Iraniana.”
Behnoud indray nilaza fa ny governemanta Iraniana nivarotra etona sy solika tamin'ny vidiny 100 miliara dolara tamin'i Shina dia maniry ny hividy ny fankatoavan”izy ireo ao amin'ny Filan-kevi-piarovana mba hisorohana ny sazy mifandraika amin'ny hetsika nokleariny.